Racecourse na ebe ihe omume Punchestown - IntoKildare
Punchestown Racecourse & Omume Ọnọdụ
Ndị mmadụ na -eme Punchestown
Bụrụ onye na -ekiri ihe - Bụrụnụ akụkụ ya
Ndị mmadụ na-eme Punchestown, anyị na-atụkwa anya ịnabata gị na ebe egwuregwu a na-emeri emeri nke nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme. N'ịbụ onye ama ama maka nnabata enyi na ọmarịcha ikuku ya, Punchestown na -enye ahụmịhe egwuregwu Irish pụrụ iche na ezigbo ya ebe ị nwere ike jiri nnukwu ịgba ọsọ na -eme ihe n'ubu ka ị na -eji nnukwu agwa ụlọ ọrụ mepụta ncheta n'ụbọchị ahụ.
Ahụmịhe egwuregwu ole na ole atụnyere ike ọkụ na izi ezi nke ịgba ịnyịnya. Na Ireland, ịgba ịnyịnya bụ ebe egwuregwu na ọdịbendị jikọtara. Ọ bụ ihe dị n'ime ọdịnala na ihe nketa Irish. Ọ dị ngwa, ọ siri ike, ọ na -asọ mpi mana ọ na -akpali akpali, na -akpali akpali ma na -enwekwa oke nha. Oge ịgba ọsọ Punchestown na -amalite site na Ọktọba ruo June n'afọ ọ bụla yana ngụkọta oge 20.
Ruo ụbọchị ise na Eprel Punchestown ọ bụla na -akwado nnukwu mmechi na ihe ngosi oge maka egwuregwu ahụ. Nnukwu ego a na -agbata n'ọsọ, ịnyịnya ndị Irish na ndị Britain kacha mma, ndị na -enye ọzụzụ na ndị na -agba ọsọ na -asọ mpi ihiwe ndị mmeri na ndị dike. Nke a jikọtara ya na nri dị ịtụnanya, azụmaahịa, ntụrụndụ na ikuku na -adọta igwe mmadụ karịrị 125,000.
Ọ dabara nke ọma na saịtị acre 450 n'ime ọmarịcha obi nke mpaghara Kildare na nsọtụ ugwu Dublin Wicklow na n'ime otu elekere Dublin ọdụ ụgbọ elu na etiti obodo, a na -ahụta ịgba ọsọ ahụ dị ka otu n'ime iri kachasị n'ụwa.
N'ihi oke saịtị na akụrụngwa jikọtara ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na ebe egwuregwu, a na -ewere Punchestown dị ka otu egwu egwu, ihe omume na ebe ngosi kacha mma na Ireland. Ndị otu nọ na Punchestown nwere ahụmịhe na ihe ọmụma dị ukwuu na ụlọ ọrụ ihe omume nke jikọtara ya na ụdị nka dị iche iche ga -enyere onye nhazi ọ bụla aka ịhazi ihe ịga nke ọma.
Nhọrọ ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, ụlọ mmanya na ime ụlọ nkeonwe na -ahụ na gị na ndị ọbịa gị ga -ezu ike ma nwee ọmarịcha egwuregwu Irish na nri na ihe ọ beụ inụ na gburugburu dị mma.
Adventure & Ihe, Outdoors, Onye na-agba ịnyịnya Kildare, Naas
Naas, Obodo Kildare, Ireland.